टिकटक रमाउँदै नेपाली कलाकार - A2Z Online Khabar A2Z Online Khabar
टिकटक रमाउँदै नेपाली कलाकार
काठमाडाैं, जेठ ६ : लकडाउनका कारण नेपाली चलचित्रका कलाकारहरू यतिबेला फुर्सदमा छन् । उनीहरूले एक्सन-कट सुन्न नपाएको पनि दुई महिना नाघिसक्यो । धेरैलाई अभिनयको तलतल लागिरहेको होला ।
नायिकाहरूको हकमा चाहिँ अभिनयको तलतल मेटाउन सहयोग गरेको छ, टिकटकले । विश्वव्यापीरुपमा लोकप्रियता कमाएको यो चिनियाँ एपमा नेपालका नायिकाहरू मज्जाले रमाइरहेका छन् । चलचित्र र म्युजिक भिडियोमा पोख्न नपाएको अभिनय उनीहरू टिकटकमा पोखिरहेका छन् । लकडाउनमा त झन् उनीहरूका लागि समय बिताउने माध्यम पनि बनेको छ टिकटक।
त्यसो त लकडाउनभन्दा अगाडि पनि थुप्रै नेपाली नायिकाहरू टिकटकमा सक्रिय नै थिए । १५ सेकेन्डको भिडियोमा लिपसिङ गरेर नायिकाहरूले आफूलाई सस्तो बनाएको टिप्पणी हुने गरेको पहिल्यैदेखि हो । तर, के फरक पर्छ उनीहरूलाई ? टिकटकमा वाहवाही गर्नेहरूको कमी हुँछैन । फलोअर्सको कमी हुँदैन ।
टिकटकमा अहिलेसम्म दुई सय २९ भिडियो पोस्ट गरेकी वर्षाका आठ लाख ४३ हजार ६ सय फलोअर्स छन् । यसैगरी उनले कुल मिलाएर १ करोडभन्दा बढी लाइक्स प्राप्त गरेकी छिन् । उनी ट्रेन्डिङमा रहेका गीत र डाइलगहरूमा अभिनय गर्छिन् ।
अर्की चर्चित नायिका आँचल शर्मा पनि टिकटककी सक्रिय युजर हुन् । दुई वर्षदेखि टिकटकमा देखिँदै आएकी उनका फलोअर्स पाँच लाख ८४ हजार जना छन् । आँचललाई टिकटकले निकै फाइदा पनि भएको छ । उनले म्युजिक भिडियो खेलेका धेरै गीत टिकटकबाट हिट भएका छन् ।
वर्षा शिवाकोटीको इन्ट्री
नायिका वर्षा शिवाकोटी पहिले टिकटकको ‘खुंखार विरोधी’ थिइन् । स्थापित कलाकारहरूले टिकटकमा अभिनय गरेर आफूलाई सस्तो बनाउनुहुँदैन भन्ने उनको मान्यता थियो । तर, अहिले उनले पनि टिकटकमा इन्ट्री मारेकी छिन् ।
टिकटकमा आउनुको कारणबारे उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘मलाई धेरै साथीभाइ र दर्शकहरूले टिकटकमा आउन आग्रह गरिरहनुभएको थियो । पहिल्यै इन्ट्रेस्ट लागेको थिएन । तर, अहिले यो निकै ठूलो प्लेटफर्म भइसकेको रहेछ । त्यसैले आफ्नो चलचित्र र म्युजिक भिडियोको प्रमोसन पनि गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले आएकी हुँ । म जे पायो त्यही भिडियो पोस्ट गर्दिनँ ।’
उनले तीन–चार दिनअघि मात्रै टिकटक एप्लिकेसन मोबाइलमा डाउनलोड गरेको बताइन् । हेर्दै जाँदा रमाइलो लागेपछि आफूलाई पनि बनाउन रहर लागेको उनको भनाइ छ । अर्की नायिका बेनिशा हमाल पनि अहिले टिकटकमा देखिन थालेकी छिन् । उनी टिकटक पहिले पनि चलाउँथिन् । तर, बीचमा छाडेकी थिइन् ।
बेनिशाले भनिन्, ‘पहिले चलाउँथे तर यसमा धेरै समय बित्न थालेपछि मोबाइलबाट एप्लिकेसन नै हटाइदिएँ । अहिले लकडाउनले गर्दा फुर्सद भयो । त्यसैले फेरि चलाउन थालेकी हुँ ।’
बाहिर को–को ?
ऋचाकै समकालीन नायिका नम्रता श्रेष्ठ पनि टिकटक बनाउँदिनन् ।
टिकटक एउट विश्वव्यापीरुपमा लोकप्रिय प्लेटफर्म हो । १५ सेकेन्डको लिपसिङ गरेको भरमा धेरैले विश्वभर प्रशंसक कमाएका छन् । नेपालकै केही टिकटकरका पनि विश्वव्यापी फलोअर्स छन् ।
केही पुरुष कलाकार पनि
दुई चल्तीका नायक प्रदीप खड्का र पल शाह चाहिँ टिकटकमा देखिने गरेका छन् । उनीहरूको फ्यान फलोइङ पनि राम्रै छ । नायक आकाश श्रेष्ठ नायिका पूजा शर्मासँग केही टिकटकमा देखिएका छन् । पछिल्लो समय उनीहरूको निकटता निकै बढिरहेको टिकटकमा पनि झल्किन्छ ।
पछिल्लो समय हास्यव्यङ्ग्य कलाकार सन्दीप क्षेत्री पनि यो प्लेटफर्ममा तानिएका छन् । सन्दीपले मिठाईलाल जाधवका रुपमा बोलेका धेरै रमाइला संवाद पहिल्यैदेखि टिकटकमा फेमस थिए । तर, उनको आफ्नै अकाउन्ट भने थिएन । अहिले उनी टिकटकमा हिन्दी फिल्मका डाइलगमा लिपसिङ गरिरहेको भेटिन्छन् ।
वरिष्ठ हास्यव्यंग्य कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले पनि टिकटक बनाएका छन् । मदनकृष्णले एउटा लोकगीतमा गरेको रमाइलो नृत्य सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भइरहेको छ ।